Fomba fampandrosoana - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Hatramin'ny 1990 YALIS Design dia nanamboatra tahony varavarana ao amin'ireo ozinina ao Shina izay misy ny fizotry ny famokarana manontolo. YALIS Design dia nanolotra ireo fantsom-baravarana avo lenta any amin'ny firenena maro. Nanaparitaka ny hevitry ny marika YALIS izy ary mamolavola ny vokatra avy aminy, mitazona ny hafainganan'ny tsena hamaly ny filan'ny mpanjifa. Fitaovana varavarana maoderina natao tany Sina ary natao faran'izay avo indrindra any Chine hamidy erak'izao tontolo izao.
Nanomboka ny taona 1990, ny YALIS Design dia niasa ny fantsom-pizarana fitaovana ho an'ny varavarana ao Shangdong sy ireo faritany manodidina ao Shina.
Tamin'ny 2008, natsangana ny marika YALIS. Nametraka ny vokatra avo lenta izahay miaraka amin'ny tanjon'ny vahaolana amin'ny fikirakirana varavarana.
Hatramin'ny 2009, YALIS dia nahazo mari-pahaizana momba ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001, fanamarinana SGS, fanamarinana TUV ary fanamarinana EN.
Tamin'ny 2014, nifototra tamin'i Italia malaza, YALIS dia nanomboka namolavola tantaram-by firaka zinc tamin'ny fomba maoderina.
Tamin'ny 2015 dia nanomboka nanangana sy mamboly ekipa R&D YALIS. YALIS dia nanampy tamin'ny fomba ofisialy ny zina firaka zinc ho toy ny andalana vokatra vaovao.
Tamin'ny 2016, YALIS 10 famolavolana varavarana noforonina tany am-boalohany dia natomboka tamin'ny tsena ary nahazo patanty. Ary YALIS dia nihevitra ny hamolavola rafitra manavao ho an'ny famoriam-bola sy ny famafana mora foana.
Tamin'ny taona 2017, noho ny andiany voalohany am-baravarana famolavolana voalohany dia nankasitrahana teny an-tsena, ka natolotry ny YALIS ny kitapo varavarana famolavolana endrika vaovao ho an'ny tsena. Mandritra izany fotoana izany dia nanao fanandramana vaovao tamin'ny famolavolana vavahady i YALIS: nanandrana nanambatra ny sisin-tsofina sy ny famaranana samihafa ho famitana varavarana i YALIS.
Tamin'ny taona 2018, ny vavahady mihidy amin'ny famaranana mainty manjelanjelatra, ny vatan'ny varavarana hoditra, ny rosette fisaka amin'ny hatevin'ny 5mm ary ny tantana am-baravarana tsy misy rosette, dia tonga eny an-tsena ireto asa tanana 4 ireto. Mandritra izany fotoana izany dia nanomboka nanaparitaka ny marika tany Eropa ny YALIS.
Tamin'ny taona 2019, fantatry ny YALIS ny fiovana eo amin'ny tsena, ka nandefa vahaolana ho an'ny varavarana ho an'ny fanamboarana varavarana, ao anatin'izany ny vahaolana amin'ny varavarana fitaratra, ny vahaolana amin'ny varavarana hazo, ny vahaolana varavarana hazo vita amin'ny hazo aluminium ary ny vahaolana amin'ny varavaran'ny efitrano ho an'ny ankizy.
Tamin'ny taona 2020, mba hanatsarana ny fahaizan'ny famokarana sy ny kalitaon'ny vokatra, ny atrik'asa famokarana YALIS dia nanolotra ny rafitra fitantanana ISO sy ireo fitaovana famokarana mandeha ho azy isan-karazany, toy ny milina fandefasana milina mandeha ho azy, Masinina fanaraha-maso solosaina (CNC) solosaina, milina fanariana maty ho azy, milina famonosana mandeha ho azy sns.